Maitiro ekuChannel Yako Ekushambadzira Dudziro Shandisa Kuti Ubatsirwe kubva kuEcommerce Boom | Martech Zone
Maitiro Ekuchinjisa Yako Ekushambadzira Shanduro Shandisa Kuti Ubatsirwe kubva kuEcommerce Boom
Chitatu, November 11, 2020 Chitatu, November 11, 2020 Douglas Karr
Ecommerce yanga iri tsika inokwira pamusoro pemakore gumi apfuura. Uye nedenda iri, vanhu vazhinji vari kutenga pamhepo kupfuura nakare kose. Ecommerce inopa yakakwana nzira yekusvika huwandu hwevanhu pasirese kubva kurudyi kuseri kwekombuta. Pazasi, isu tichatarisa kukosha kwe kushambadzira kushambadzira services uye maitiro ekuishandisa iwo kusimudzira yako eCommerce kutengesa.
Nei Ichikosha Kuti Ushandise Nyanzvi Yekushambadzira Dudziro kune Yako Yepasirose Yekutengesa Sarudzo
Uchishandisa nyanzvi yekushambadzira sevhisi kune yako eCommerce chiitiko kunogona kukohwa mibairo mikuru. Ofer Tirosh, CEO wevapi vemitauro yemitauro Tomedes, anopa mazano nezve kutsvaga kambani ine hunyanzvi uye kuivaka yako nzira yekutengesa yepasi rese kuti uwedzere:
Kana iwe usingataure mutauro wenyika iri mubvunzo, tsvaga inomiririra agency yekushanda nayo - uye ita nekukurumidza! Kusanganisira iyo agency mune yako yepasirese kushambadzira bhizimusi kubva pakutanga kunogona kuita musiyano wakakura kumukana wako wekubudirira. Kunyangwe iwe uchitsvagurudza tsika dzemuno, uchitsvaga ruzivo pane yakasarudzika matekiniki ekushambadzira mumusika wako wekutarisa, kana uchipa ruzivo nezve chako chigadzirwa, kuve nemumwe munhu parutivi uyo anonyatsotaura mutauro zvakanyanyisa zvakakosha. Muturikiri akanaka anokwanisa kubata zvese kubva kushambadziro ruzivo kune webhusaiti dudziro masevhisi anogona kukurumidza kuve chikamu chakakosha cheako nzira yekutengesa yepasi rese.
Ofer Tirosh, CEO weTomedes
Ecommerce iri kunyatso kuputika gore rino, nevanhu vanomanikidzwa kutenga online pavanenge vachichengeta padyo kana kumanikidza kusimukira munharaunda. MuQ2 2020, eCommerce kutengesa muUS, semuenzaniso, jumped kusvika 16.1%, kubva pa11.8% muQ1.
Verenga pamusoro kuti udzidze kushandisa kushambadzira kushambadzira kubatsira kukura yako eCommerce venture.
Maitiro Ekushambadzira Yako Ecommerce Saiti Uchishandisa Kushambadzira Dudziro
Kushambadzira kushambadzira inovhara akawanda marudzi edhijitari kushambadzira ayo anogona kukubatsira iwe kuendesa izwi kunze kune chairo huwandu hwevanhu nezve yako eCommerce webhusaiti. Kuburikidza kushambadzira kushambadzira, iwe unogona kuve nechokwadi cheinotevera yedhijitari yekushambadzira yekuedza fannel vanhu kuburikidza kune yako eCommerce saiti. Ndeipi mimwe mienzaniso yeshanduro? Kunyanya kubva padhijitari mamiriro, anosanganisira:
Dhijitari kushambadzira, kusanganisira ekuratidzira kushambadzira uye enhau enhau kushambadzira
Kushambadzira kushambadzira inogona zvakare kubatsira nekuturikira zvekushambadzira zvetsika kushambadzira kana icho chiri chinhu icho kambani yako inoona chakakosha kudyara mauri senge iwe tarisa pane yekushambadzira zano miedzo. Kushambadzira kushambadzira inokwanisa kubata echinyakare kudhinda kushambadzira, mabrochure, tsamba dzekutengesa, mapepa, makatalog, uye nezvimwe
Zvemukati kushambadzira ndeimwe nzira yekuchinjisa yako kushambadzira kushambadzira shandisa muCommerce boom. Izvo hazvikurudzire zvakananga chigadzirwa kana sevhisi. Panzvimbo iyoyo, inogadzira zvemukati zvinodzidzisa kana kuvaraidza akakodzera huwandu hwevanhu. Semuenzaniso, chipfuwo chinopa eCommerce chitoro chinogona kuburitsa blog posvo nezvenzira dzakanakisa dzekudzidzisa mwana mutsva.
Zvemukati zvekushambadzira zvinoita kuti vanhu vabatanidzwe neiyo mhando uye vanotaura kune vangangove vatengi nenzira inobatsira kwavari. Kushambadzira kwechinyakare kunoda kuti vanhu vatenge, inova iyo kudzima kune vazhinji vevashandisi vemazuva ano veinternet Zvemukati kushambadzira zvinogona kuve chakasimba chikamu chechero nzira yekutengesa yepasi rese.
Kana iwe ukasarudza kuenda nekushambadzira zvemukati, masevhisi ekushandura anogona kuve nechokwadi chekuti zvemukati zvinobatsira uye zvinonakidza zvinochengeta meseji yayo yepamoyo uye inokodzera zvine hukama nemutauro mutsva netsika.
Kushambadzira Dudziro uye Yako Ecommerce Saiti
Kushambadzira kushambadzira inogona zvakare kubatsira neako eCommerce saiti pachayo. Kuve nechokwadi chekuti yako saiti yashandurwa uyelocalized chikamu chakakosha che bhizinesi repasirese zano. Chii chinonzi dudziro? Dudziro inova nechokwadi chekuti iwo mavara pachawo anoverenga zvakanaka mumutauro mutsva. Nekudaro, localization yakakoshawo zvakanyanya kune iyo eCommerce chiitiko. Localization inogona:
Gadziridza zvese zviratidzo uye fomati pawebhusaiti, senge mari dzemari, mafomati ekero, uye nhamba dzenhare
Ita shuwa kuti marongero acho anoenderana nezvinotarisirwa nevatengi vemuno uye nemutauro mutsva
Gadziridza mifananidzo yakaita semifananidzo kuti ifanane nemagariro emunharaunda
Batsira iyo eCommerce saiti kuenzanisa mirau yemuno semitemo yekuvanzika kana zviziviso zvecookie
Chengetedza zvirimo pawebhusaiti pachayo zvine mutsika zvine mutsindo
Chakanaka kushambadzira kushambadzira sevhisi inogona kubata dudziro, yenzvimbo, uye kunyangwe kuyambuka. Inogona kuratidza kunyora uye kushandura kwakaitwa nyore yemavhidhiyo zvemukati uye inogona kuona kuti ese kopi anoenderana nezvakatarisirwa nevateereri vateereri.
Zvese izvi zvese zvinobatana kuita nyanzvi-inotaridzika eCommerce webhusaiti. Zvakajairika kuwana eCommerce saiti iyo isina kushandurwa zvakanaka kana ichine zviratidzo zvemari mune imwe fomati yekunze. Izvo zvidiki zvinhu zvinoita kuti webhusaiti yacho ive yakaoma kushandisa uye kukuita kuti unetseke kana iwe wakagumburwa pane chitsotsi saiti. Ita shuwa iyo eCommerce vatengi ruzivo yakanaka kune vako vatengi newebhusaiti yenzvimbo. Localization chikamu chakakosha cheakanakisisa nzira dzekutengesa dzenyika dzese.
Maitiro Ekuwana Akachipa Ekushambadzira Dudziro Services
Ive neshuwa yekutenga uchitenderera pakati peakasiyana masangano ekushandura. Unogona kuvawana nekukumbira kwakatenderedza yako yehunyanzvi network kana kutsvaga online.
Iwe unogona kuwana masevhisi emuno uchishandisa mazwi senge ekushandura masevhisi padhuze neni, nyanzvi dzekushandura masevhisi UK kana London agency agency. Iwe unogona zvakare kutarisa kumusoro sevhisi nemutauro waunoda, uchishandisa mazwi senge kushambadzira kushambadzira muchiSpanish, kushambadzira kushambadzira muchiChinese, kana kushambadzira kushambadzira muchiFrench.
Ita shuwa yekugadzirira runyorwa rwemibvunzo pane yega yega sevhisi. Mapinduriro aunoita mibvunzo iyi anokuudza kuti vane ruzivo rwakadii uye kuti vanotaura nevanhu zvakadii. Iwe unogona kubvunza nezve zvemitengo, kuti vanoramba sei vakarongeka kuti vagare pane yakatarwa nguva, izvo avo muturikiri magwaro ari, uye chii chavo ruzivo ne kushambadzira kushambadzira ndiro.
Tags: ecommerce dudzirokutengeserana kwepasi reseecommerce yepasi resekudyidzana kwenyikakushambadzira kushambadziraMultilingualTomedestranscriptionshanduro yechinyorwashanduromabasa ekushandura
6 Matanho Ekutora Vatengi Dhata Platform (CDP) Tenga-mukati Neako C-Suite
Software seSevhisi (SaaS) Churn Rate Statistics ye2020